Shiinaha Fused Alumina Magnesia Spinel warshad iyo alaableyda | Yufa
1.Waxaa loo isticmaalaa birta & birta, sibidhka iyo warshadaha kiliyaha, iwm
2.Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro leben alumina-magnesia ah oo heer sare ah, waxqabadka sare ee alumina-magnesia castables, biiyaha isdabajoogga, lebenka ladle, lebenka sare ee foornada dabka furan iwm.
3.Waa qalab ku habboon in lagu beddelo qalabka wax lagu karsado ee magnesia-chrome. Intaa waxaa dheer, waxaa loo isticmaalaa badeecadaha diidan, qaybaha horay loo diyaariyey, iyo qalabka diidmada ee aan qaabeyn.
Budhcad iyo Budada Fine
Noocyo kale ayaa la heli karaa markii la codsado.
1. Codsiga soosaarida foornada qaanso koronto ee horumarsan waxay kordhisaa heerkulka dhalaalaya waxayna ilaalin kartaa wax soo saar heerkul sare oo joogto ah, taas oo hagaajinaysa tayada aluminium-magnesium spinel.
2. Marka loo eego shuruudaha kala duwan ee macaamiisha ee maadada magnesium, alaabooyin kala duwan oo ku habboon ayaa la soo saaraa. La kulan shuruudaha macaamiisha macaamiisha.
3. Adoo adeegsanaya tikniyoolajiyad wax soo saar sare leh iyo tikniyoolajiyadda caanaha, waxyaabaha wasakhda ku ah sheyga ayaa ka hooseeya.
4. Waxay hagaajin kartaa qalabka 'caabbinta kuleylka ee kuleylka waxaana lagu siin karaa karti-ka-qaadis wanaagsan.
5. Waxay si wax ku ool ah u hagaajin kartaa caabbinta slag iyo caabbinta shooga kuleylka ee alaabooyinka diidmada iyo kuwa aan diidaneyn.
Janjeeri Foornada - Wareejinta - Qabooji - Barmac Burburka & Kala-soocidda - Samaynta Ciidda - Bakhaarka
Si loo helo spinel aluminium magnesium, halabuurka kiimikada ee Al2O3, MgO, SiO2, Fe2O3, CaO Qoyaanka, LOI waxay u baahan yihiin in la tijaabiyo, iyo waxa ku jira Al2O3 iyo MgO waxay u baahan yihiin inay ka saaraan 98%.
Muuqaal muuqda %≤
Cufnaanta Jumlada g / cm3≥
Hore: Iskuxirnaanta Cufnaanta Cufan
Xiga: Monocrystalline Fused Alumina